लेगुवा–भोजपुर सडक खण्डमा कालोपत्रेको काम कस्तो हुदैछ ?( फोटो फिचर) — KhabarTweet::Nepali online news portal लेगुवा–भोजपुर सडक खण्डमा कालोपत्रेको काम कस्तो हुदैछ ?( फोटो फिचर) — KhabarTweet
लेगुवा–भोजपुर सडक खण्डमा कालोपत्रेको काम कस्तो हुदैछ ?( फोटो फिचर)
भोजपुर । लेगुवा–भोजपुर सडक खण्डमा कालोपत्रेको तिव्र गतिमा भइरहेको छ । सडक कालो पत्रे हुन थालेपछि स्थानीयमा भने उत्साह छाएको छ । सडक कालोपत्रे भएपछि भोजपुरलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन सहज हुने भएको छ ।
भोजपुरको विकास र समृदि कोसेढुङ्गाको रुपमा रहेको भोजपुर–लेगुवा ६६ किलोमिटर सडक खण्ड कालोपत्रे हुन थालेपछि भोजपुरे जनता हर्षित भएका छन् । सडक खण्डको जरायोटारको सिमटार देखि लेगुवा तर्फ ५ किलो मिटर क्षेत्रमा कालो पत्रे भई सकेको छ ।
कालोपत्रे भई सडक सञ्चालनमा आए पछि धनकुटा, संखुवासभा मोरङ्ग, सुनसरी, झापा लगाएतका जिल्लामा भोजपुरको सहज सम्पर्क हुनुका साथै व्यापार व्यावसाय सहज हुनेमा भोजपुरवासी आशावादी भएका छन् ।
सडकलाई गुणस्तरिय र मापडण्ड अनुसारको वनाउन लेगुवाघाट–भोजपुर योजनाले पनि त्रिव रुपमा काम अगाडी बढाएको जनाएको छ । सडकको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई सोही अनुसार भनेको कार्यालयले भनाई छ ।
लेगुवा–भोजपुर सडक योजनाका प्रमुख विजय महतोले भने ‘हामीले कालोपत्रेका काम शुरु गरेका छौ, तर यसको गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्दै निर्माण व्यावसायीलाई कडा रुपमा निग्रानी गरिरहेका छौ ।’ महतोका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा ३० किलोमिटर कालो पत्रे गरि सक्ने तयारी रहेको छ । सम्झौता अनुसार सडकको काम २०७४ साल माघ १ गते सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
करिव १० वर्ष अगाडी हेलीकप्टरबाट बस ल्याएर कच्ची सडक मार्फत भोजपुरमा यातयात सञ्चालनमा आएको थियो । यसरी भोजपुरे जनताले दुख गरि जिवन गुजरा गरिरहेको अवस्थामा, सडकलाई दिर्गकाल सम्म सञ्चालन योग्य वनाउन सुपरभिजन कन्सल्टेन्सीले पनि आफ्नो कामलाई कडाईका साथ गरिरहेको जनाएको छ । कन्सल्टेन्सीले निर्माण व्यावसायिलाई हरेक साम्रगीहरु ल्यावमा गुणस्तर परिक्षण गरेर मात्र प्रयोग गर्न दिएको वताएको छ ।
सुपरभिजन कन्सल्टेन्सीको इन्जिनियर बुद्धी प्रसाद न्यौपानेले भने ‘हाम्रो काम सडकको गुण स्तरको चेक जाच गर्ने हो, त्यसैले हामीले लेगुवामा गिटी कम गुण स्तरको भएकोले निर्माण व्यावसायीलाई मोरङ्ग जिल्लाको चिसाङ्गबाट गिटी ल्याउन लगाएर काम गर्न लाएका छौ । ’ न्यौपानेका अनुसार सडकको गुण स्तर वृद्धिको लागि गिटी वालुवा लगाएत साम्रगी ल्याव टेस्ट गरेर मात्र प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
निर्माण व्यावसायीले पनि कामलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न लागीपरेको जनाएका छन् । कामलाई मेनपावर, यन्त्र उपकरण वढी परिचालन गरेर भए पनि मापडण्ड अनुसारको काम गर्ने वताएका छन् । वर्षात समय भएकोले कुनै समयमा काम गर्न केहि समस्या भएको पनि दुखेसो गरेका छन् । निर्माण कार्यलाई गुणस्तरिय वनाउन निर्माण व्यावसायीले पनि प्रविद्धता जनाएका छन् ।
निर्माण व्यावसायीका तर्फबाट अम्रित श्रेष्ठले भने ‘काम समय मै सक्ने तयारीमा छौ, तर हामीलाई मौसमको कारण अलिक समस्या भईरहेको छ’ ।
सडक निर्माणको जिम्मा संयुक्त रुपमा टेन्जीङ्ग, रमन र कन्काई कम्पनीले लिएको छ । हाल निर्माणको काम कन्काई कम्पनी कम्पनीले मात्र गरि रहेको छ ।
कम्पनीले लेगुवा भोजपुर सडकको ६५ दशमलव ५ किलो मिटरमा काम गर्नु पर्नेछ । सडक एडीभी को ९९ करोड ४४ लाख ६७ हजार ५ सय लगानीमा निर्माण भईरहेको छ ।